လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်၌ ဝင်ပြိုင်မည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်၌ ဝင်ပြိုင်မည်
Posted by chatsu on Dec 4, 2011 in Copy/Paste | 13 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်၌ ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံမည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံပြီး အနိုင်ရသွားသော ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအမတ် ဦးစိုးတင့်သည် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုဝန်ကြီးရာထူး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့်အတွက် ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်သည် လစ်လပ်နေရာဖြစ်သွားကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံရေးအင်အားစုများထဲတွင် တချို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဝင်သင့်သေးကြောင်း ပြောဆိုကြ သော်လည်း တချို့ကမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လွှတ်တော်ထဲသို့ သွားရောက်ရန် နောက်ကျနေပြီဟု သုံးသပ်ပြောဆိုလျက်ရှိသည်။
လစ်လပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝင်ရောက် အရွေးချယ်ခံနိုင်သည်ဟု သုံးသပ်ကြသော်လည်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုံးဝဝင်ပြိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က အတည်ပြုပြောကြား လိုက်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝင်ပြိုင်မည့်မဲဆန္ဒနယ်တွင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ(တစည) က လုံးဝဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် မဟုတ် ကြောင်း တစညပါတီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
၎င်းအပြင် NLD ပါတီက လစ်လပ်နေရာ ၄၈နေရာစလုံးတွင် ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံမည်ဖြစ်သည်အတွက် အတိုက်အခံပါတီများက ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်နေကြကြောင်း နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှစုံစမ်းသိရသည်။
တရားဝင်ကြေငြာထားသော လစ်လပ်နေရာ ၄၈နေရာတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ ၄၀နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၌ ၆နေရာနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် ၂နေရာ ဖြစ်သည်။
NLD ပါတီသည် လာမည့်သတင်းအပတ်အတွင်း ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရမည် ဖြစ်သည့်အတွက် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်များတွင် အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လစ်လပ်နေရာမဟုတ်သည့် မြို့နယ်များတွင်မူ ဝန်းရံရေးအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
“တကယ်တော့ ဒေါ်စုအဆင့်က ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ရမယ့်အဆင့်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ” ဟု NLDမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားသည်။”
သူဘာကြောင့် ပြောလဲ မသိပေမဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဒေါ်စု ကို ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ၀င် မပြိုင်စေချင်ဘူး ။ အထူးသဖြင့် ဒီ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုပေါ့။
နေပြည်တော်သွား နေရပြီး အချိ်န်ကုန် လူပန်း မလုပ်သင့်ဘဲ အခြား NLD အဖွဲ့ဝင်တွေသာ အရွေးခံသင့်သေးတယ် ထင်တာဘဲ။ နောက်ရွေးကောက်ပွဲ မှ ပါဝင်ပြီး အစိုးရ အဖွဲ့ ထဲ ၀င် သင့်တယ်ထင်တာဘဲ။
ဒေါ်စု ကော့မှူးနယ်သား မဟုတ်ဘဲ ဘယ်လိုလုပ် ဝင်ပြိုင်ခွင့်ရလဲ မသိဘူးနော်။ ရွေးဂေါက်ပွဲ ဥပဒေက ဘယ်လိုဆိုထားလဲ သိချင်သား။။ ဒေါ်စု လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ရင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အောင်မြင်မမြင်တော့ မသိဘူး အနည်းဆုံးတော့ လွှတ်တော်အမတ်များ လက်ရှိစည်ပင်သာယာ တည်းခိုခန်းထက် ပိုကောင်းတဲ့ နေရာထိုင်ခင်း ရကြပါမယ်။
ယူအက်စ်မှာ.. နိုင်ငံရေးသမားက.. အမတ်မဟုတ်ဖူး(မဖြစ်ဖူး)ရင်.. တပိုင်းသေနေတာလို့ မြင်မိတယ်..။
အမတ်ဖြစ်မှ.. နိုင်ငံတော်ရဲ့..တချို့ပြန်တမ်းတွေ..စာတွေ. ဖတ်ခွင့်ရတာမျိုးရှိတာကိုး..။
ဦးဝင်းထိန်က တကယ်ကို.. အဲဒီလိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့ .. တော်တော်စိတ်ဝင်စားမိတာပဲ..။
သူ့ကို.. ဒီချုပ်ရဲ့.. အကောင်းဆုံး ဦးနှောက်ကစားသမားတယောက်လို့.. မြင်မိလို့ပါ..။
သတင်းရေးတဲ့သူရော ဖတ်တဲ့မသာတွေရော ရေးရဖတ်ရပြီးတာဘဲ ဆိုပြီး စောက်သုံးမကျတဲ့
အတွေးခေါ်တွေ ကြပ်ကြပ်လုပ်ကြ တိုးတက်မယ်
( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်၌ ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံမည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။)
ဘယ်သူကပြောတာလဲ ဆိုတာ ဖေါ်မပြသင့်ဘူးလား ??
အောက်က သတင်းနဲ့ ညှိကြည့်ပါ
ကြုံလို့ပြောရမယ်ဆိုရင် သတင်းတွေကို ရေးသားကြတဲ့အခါ အကြမ်းအားဖြင့် ပုံစံနှစ်မျိုးရှိပါတယ်
ရရှိတဲ့သတင်းကို ရရှိတဲ့လို မူရင်းတိုင်းရေးတာရယ်
ရရှိတဲ့သတင်းအပေါ်မှာ မိမိရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကို တွဲပြီးရေးတာရယ်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးပါ
သဂျီးမင်း အလွန်နာမကျမ်းဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ ဥပမာ
ဒီအကြောင်းကို သတင်းရေးတဲ့အခါ ကိုယ်ကမလိုတိုင်း သဂျီးစုတ် သဂျီးနာ
အနာမျိုးကိုးဆယ့်ခြောက်ပါးနဲ့ အဖြစ်ဆိုးတဲ့ရောဂါကြီးခံနေရပြီ ဘာဘာညာညာ
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ရုတ်တရက် နှလုံးခုန်ရပ်ပြီး လျှောသွားတယ်ဆိုပါတော့
ဆရာကြီး မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု တစ်ယောက်
လူသူတော်ကောင်းတို့၏ ဖြစ်စဉ်အတိုင်း ရုတ်တရက် ဇီဝချုပ်ပြီး
ကံကုန်ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်ပြီး နတ်ပြည်မှာ ပျောင်ပျောင်လက်လက်
ရွှန်းရွှန်းတောက်တောက် ထယ်ထယ်ဝါဝါ ခန့်ခန့်ညားညား ဘုံဘိမန်ကြီးပေါ်လာပြီး
နတ်သမီး တစ်ဖက် ရှစ်သောင်းကျော်ဖြင့် နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားနေပါသည်
အိုက်ဒလို ကိုယ်လိုရင် လိုသလို ရေးကြတာ
ဒါက ခင်ဗျားတို့ လေ့လာနိုင်ဘို့ သဘောကိုပြောတာပါ
ဆိုတော့ကာ ဆက်လက် ချိန်ဆကြည့်ပါ
ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်မြေမှာ အရွေးခံဖို့ ဒေါ်စုစဉ်းစား – By ကိုကျော်ကျော်သိန်း – တနင်္လာ, 05 ဒီဇင်ဘာ 2011
﻿ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကော့မှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အနေဖြင့် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စဉ်းစားနေကြောင်း သိရ
လာမည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကော့မှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စဉ်းစားလျက်ရှိနေကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“လာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့အခါ ဆင်းရဲနွမ်းတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကူညီဖို့အတွက် စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုစဉ်းစားပြီးနောက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ လွတ်လပ်နေတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် ခြောက်နေရာအနက် ကော့မှူးမြို့နယ်ကို စဉ်းစားထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ အတည်ပြု မဆုံးဖြတ်ရ သေးပါဘူး။ နောက်ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်း လာမယ့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကျင်းပသွားမည့် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်များကို တရားဝင်ထုတ်ဖော် ကြေညာခြင်း မရှိသေးပါဘူး” အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးအုန်းကြိုင်က Eleven Media Group သို့ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ၌ ကော့မှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုးတင့်က ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် လက်ရှိအချိန်၌ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုတိယ၀န်ကြီးအဖြစ်
မဲလိမ် သည့် ပူတင် ကို ပြည်သူ တွေ ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြ ပြီ
ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ က ရုရှား နိုင်ငံ တွင် ကျင်းပခဲ့ သည့် ပါလီမန် ရွေးကောက် ပွဲ ရလာဒ် ကို
မကျေနပ် ၍ မော်စကို နှင့် စိန့် ပီတာ စဘတ် မြို့ များ တွက် ပြည်သူ တွေ က ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြ
နေ ကြ သည် Radio Free Europe မှ ထုတ် လွှင့် သွား သည်။
ဒူးမား ခေါ် အောက် လွှတ် တော် ရွေးကောက် ပွဲ တွင် ပူတင် ၏ United Russia Party အား
မဲပေး မှု ဦး ရေး ကျဆင်း ခဲ့ သော် လည်း ရွေးကောက်ပွဲ အဏာ ပိုင် များ နှင့် ပူ တင် ၏ အစိုးရ အဖွဲ့ 
မှ မသမာ မှု များ ပြုလုပ် ခဲ့ သည် ဆို သော သတင်း များ ကျယ်ကျယ် ပြန့် ပြန့် ထွက် ပေါ်ခဲ့ ပြီး
နောက် ယခု ကဲ့ သို့ဆန္ဒ ပြ မှု များ ပေါ် ပေါက် လာ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။
မော်စကို ရဲတပ် ဖွဲ့က ရွေးကောက် ပွဲ နေ့ တွင် အတိုက် အခံ အချို့ကို ဖမ်းဆီး ခဲ့ ပြီး ယနေ့ ည
ဆန္ဒ ပြ မှု တွင် လည်း ဆန္ဒ ပြ သူ ၃၀၀ ကျော် ကို ဖမ်းဆီး ထား သည်။ ဥရောပ လုံခြုံရေး နှင့် ပူး
ပေါင်းဆောင် ရွက် ရေး အဖွဲ့ ၊ အမေရိကန် နှင့် ဥရောပ သမဂ္ဂ တို့ရုရှား ရွေးကောက် ပွဲ ရလာဒ်
သည် စိုးရိမ် စရာ အခြေအနေ ဖြစ်နေ သည် ဟု ထုတ် ဖော်ပြောကြား သည်။
မော်စကို လူထု သည် ချမ်းအေး သည့် ဆောင်းရာသီ ဉ် ဆီးနှင်း များ ကျဆင်း နေ သည် ကို အန်
တုပြီး ဆန္ဒ ပြ ကြ ခြင်း ဖြစ် သည်။ ပထမနေ့ဆန္ဒ ပြ မှု တွင် ဆန္ဒ ပြ သူ ပေါင်း ၅၀၀၀ ခန့်ပါဝင်
ပြီး ပူတင် ကို လိုလား သူ များ က အတိုက် အခိုက် တို့၏ အင်တာနက် စာမျက် နှာ များ ကို ဆိုင်
ဘာ တိုက် ခိုက် မှု များ လုပ်ဆောင် ကြ သည်။
ရုရှ ၀န်ကြီး ချုပ် ပူတင် က အနောက် အုပ် စု သည် နိုင်ငံ ကို မတည် မငြိမ် ဖြစ်အောင် လှုံ ဆော်
သည် ဟု စွပ် ဆွဲ ထား သည်။
ပူတင် ၏ United Russia Party သည် လွှတ်တော် ၏ အမတ် နေရာ ၅၀ ရာ ခိုင်နှုန်း ကို ရရှိ ခြင်း
မရှိ ဟု တရား ၀င် သတင်း ထုတ် ပြန် သည်။ အတိုက် အခံ များ က မဲ ပြန်လည် ရေတွက် မှု ပြု
ရန် နှင့် အာဏာ ရ ပါတီ ဘက် ကို မလိုက် ရန် ရွေးကောက် ပွဲ ကြီးကြပ် သူများ ကို တိုက် တွန်းထား
ဆန္ဒ ပြ သူ များ က ပူတင် အလို မရှိ ၊ တော်လှန်ရေး စကြ စို့ဟု ကျွေးကြော်က ကရင်မလင် နန်း
တော် သို့ချီတက် ခဲ့ ကြ သည်။ ယခု လူထု အုံကြွ မှု သည် ရုရှား နိုင်ငံ တွင် ဆယ်စု နှစ် တစ်ခု အ
တွင်း အကြီး မား ဆုံး ဖြစ်သည်။
ပူ တင် သည် ၂၀၀၀ ပြည့် နှစ် မေလ ၇ ရက်နေ့ မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၇ ရက် နေ့ အထိ သမ္မတ
အဖြစ် အာဏာယူ ခဲ့ ပြီး ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ပြန် လည် အရွေးခံ နိုင်ရန် အတွက် ၀န်ကြီး
ချုပ် တာဝန် ကို လွှဲ ပြောင်း ရ ယူ ခဲ့ သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ရွေးကောက် ပွဲ တွင် အနိုင်ရရှိ
ပါက ခြောက် နှစ် သက်တမ်း နှစ် ကြိမ် အတွက် ထပ်မံ အရွေး ခံ နိုင် ရ ကာ ၂၀၂၄ ခု နှစ် အတွက်
သမ္မတ တာ ၀န် ကို ထမ်းဆောင် နိုင်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ တွင် သမ္မတ ရွေးကောက် ပွဲ ကျင်း ပမည် ဖြစ်ရာ လက်ရှိ ၀န်ကြီးချုပ် ပူ တင်က
သမ္မတ နေရာ မှ ပါဝင် ယှဉ် ပြိုင် မည် ဖြစ် သည်။
ကိုယ်က ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားပြီးသာ လိုက်ဝေဖန်နေတာ
ထိပ်ပြောင်ညစ်ပတ်တဲ့အခါ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ တွေးထားကြပါ
Eleven Media Group ကသတင်းပါ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးသိပြီးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်
နောက်ထပ်သုံးလကြာသည့်တိုင်အောင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်မြောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာပါ
နောက်၃လ ဆိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလကုန် အထိလို့ ညွှန်းချင်တာဖြစ်မယ်
သည်တော့ မတ်လမှာတော့လုပ်ကောင်းပါရဲ့ ဧပြီ ဆို ဘတ်ဂျက်ရီးယား အသစ် စပီကိုး…
အမတ်အသစ် ၀န်အသစ် အဖြစ် မြင်ချင်စမ်းပါဘိ..
မတ်လ မလုပ်ဖြစ်ရင်တော့ နောက် လေးလပတ်ကျမှ လုပ်မယ် ဘတ်ဂျက်ရီးယား စသွားလို့
ဘာညာ ဆိုပီး အရူးကွက် နင်းသွားနိုင်ကြောင်း ….
သူ တို့ ရဲ့ကြို တင် မဲ ကို ရွေးကောက် ပွဲ မ စ ခင် အ ရင်ေ၇ တွက် ခိုင်း ။နောက် မို့ ဆို အိတ်ကြီး အိတ် ငယ် အ သွယ်သွယိနဲ့မဲေ၇ ပြီး တဲ့အ ခါ ရောက် လာ လိမ့်မယ်။